သင့်၏ပထမဆုံးဘွတ်ကင်အတွက် ၈% ထိအထူးလျော့ဈေး!
သင်က Easybook ကိုအခုမှစပြီးအသုံးပြုမှာလား? ဒါဆိုရင်တော့ယခုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းဘွတ်ကင်ဝန်ဆောင်မှုမှာ ၈% ထိအထူးလျော့ဈေးကိုရယူလိုက်ပါ!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Easybook.com ဟာဆိုရင်ဖြင့်အရှေ့တောင်အာရှဒေသရဲ့ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်၊ရထားလက်မှတ်၊ဖယ်ရီလက်မှတ်နဲ့ကားစင်းလုံးငှားခြင်းများကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အွန်လိုင်းဘွတ်ကင်ဝက်ဒ်ဆိုဒ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သင့်အနေနဲ့ Easybook မှနေတဆင့်လက်မှတ်များကိုအချိန်အခါနေရာဒေသမရွေးလွယ်ကူစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အခုပဲ Easybook ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါ! ဤပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကိုရရှိနိုင်ရန်သင်၏ Easybook အကောင့်မှနေတဆင့် log in လုပ်ပြီးအောက်ဖော်ပြပါ ပရိုမိုးရှင်းကုဒ် ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုပါ။
ပရိုမိုးရှင်းကုဒ် : WELCOME2EB
*အသုံးပြုသူအသစ်များအနေဖြင့် ၈% ထိအထူးလျော့ဈေးကိုခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးထိုအထဲတွင်အခြားဝန်ဆောင်မှုကြေးများနှင့်အခွန်အခများမပါဝင်ပါ။
*ဤပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်မှာ Easybook အားပထမဦးဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုသူများအတွက်သာဖြစ်ပြီးပရိုမိုးရှင်းကုဒ်အား checkout ပြုလုပ်သည့်အချိန်တွင်ရိုက်ထည့်အသုံးပြုရပါမည်။
* ဤပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်သည် ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်၊ဖယ်ရီလက်မှတ်နှင့်ရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်များကို Easybook ၏ဝက်ဒ်ဆိုဒ်၊မိုဘိုင်းဝက်ဒ်ဆိုဒ်နှင့်မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်း(Android & iOS)များမှတဆင့်ဝယ်ယူခြင်းအတွက်သာအကျုံးဝင်ပါသည်။